दाँतमा किरा लागेर एकदमै पिडा हुन्छ ? यसरी दुखाइ कम गर्न सकिन्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
दाँतमा किरा लागेर एकदमै पिडा हुन्छ ? यसरी दुखाइ कम गर्न सकिन्छ !!
नरिवलको तेलले दाँत कुल्ला गर्दा पनि धेरैथरी समस्या समाधान हुन्छन्। प्वाल पनि यही कुल्लाले ठीक गर्छ। दिनको कम्तीमा पाँच मिनेट कुल्ला गर्नुस् । अझ, खाली पेटमा कुल्ला गर्नुभयो भने झन् प्रभावकारी हुन्छ।
ल्वाङको तेल दाँतको समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा पुरानो औषधि हो। यसमा भएको औषधीय गुणका कारण प्वालले गर्ने झमझमलाई घटाउँछ। कपासमा तेल हालेर प्वाल बनेको ठाउँमा हाल्नुस्। तेल ननिल्नुहोला। यसो गर्दा पनि पीडा र झमझमबाट मुक्ति पाइन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार